Apple wuxuu dooran karaa TouchID shaashadda Shiinaha | Wararka IPhone
Apple waxay dib u bilaabi kartaa iPhone leh Touch ID, tikniyoolajiyad aqoonsi oo ay kaga tagtay iPhone-ka iyo noocyada kala duwan ee iPad-yada iyadoo loo rogay Face ID, nidaamka aqoonsiga wajiga ee ay doorteen. Xaaladdan oo kale waxay u isticmaali lahayd tiknoolajiyad lagu dhex dari lahaa shaashadda hoosteeda, laakiin waxay ku samayn lahayd oo keliya Shiinaha.
Sida laga soo xigtay wararka xanta ah ee ka imanaya dalka Aasiya, Apple ayaa fulin kara tan dhaqaaq lama filaan ah si loo yareeyo qiimaha wax soo saarka ee taleefankaaga sidaasna dib loogu soo ceshado qayb ka mid ah suuqa lumay ee Shiinaha. Laakiin ka warran adduunka intiisa kale?
Bilooyin kadib warar xan ah oo ku saabsan soosaarida iPhone X oo leh sawirka faraha ee gadaasha gadaashiisa sababtoo ah shirkadu ma awoodo inay udhaqaajiso tikniyoolajiyadda shaashadda hoosteeda natiijooyinka ugu wanaagsan, Apple waxay nagala yaabisay nidaamka aqoonsiga wajiga oo gabi ahaanba bedelay taabashada Aqoonsi, waxaana lagu dhex daray "caan" (sunnaha) caanka ah oo markii dambe inteeda kale soosaarayaasha ku degdegeen inay nuqul ka sameeyaan. Tiknoolajiyada aqoonsiga wajiga aqoonsiga ayaa cadeeyay inuu yahay midka ugu kalsoonida badan uguna amaanka badan ee suuqa, iyada oo aan lahayn wax summad kale ah oo ku guuleysatay inay u dhowaato heerkeeda, waana laga yaabaa inay taasi tahay sababta inteeda kale ee soo-saareyaasha ay u doorteen inay ku hayaan dareeraha faraha, hadda qaar badan oo ka mid ah ayaa ku dhex jira shaashadda.
Kharashaad badan oo wax soo saar la awoodi karo ayaa mas'uul ka ah tikniyoolajiyaddan si tartiib tartiib ah ayey u daadadineysaa suuqa taleefannada casriga ah, in kastoo haa, iyadoo natiijooyinka xilligan la joogo ay yihiin kuwo caqli-gal ah marka loo eego adeegsiga iyo kalsoonida. Tani waxay noqon laheyd sababta saxda ah in Apple ay tikniyoolajiyaddan ugu adeegsato iphone-kan cusub, hoos u dhigista kharashyada wax soosaarka sidaas darteedna lagu iibin karo qiimo hoose moodooyinka hadda jira. Tani waxay dib u soo ceshan doontaa suuqa Shiinaha, halkaasoo ay caqabad ku yihiin "qiimaha wanaagsan" qiyaastii $ 731 (5000 yuan).
Hadalkani wuxuu kicinayaa su'aalo badan: maxaa loo xaddidayaa bilawga Shiinaha marka iibinta iPhone-ka ay waxyeello ka soo gaadhay adduunka oo dhan? ¿Apple miyuu gaadhay tiknoolajiyad soo-bandhig ah oo la isku halleyn karo sidii ay ahayd tii hore ee Aqoonsiga Taabashada? Haddii aad hesho tikniyoolajiyaddan raqiiska ah ee la isku halleyn karo, maxaad u baabi'in la'dahay "qaan-u-sheegga" oo aad u heleysaa iPhone oo leh wejiga hore ee gebi ahaanba shaashadda lagu haysto?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Apple waxay dooran kartaa TouchID shaashadda Shiinaha
Apple wuxuu ku dhawaaqayaa natiijooyinka maaliyadeed ee Q3 2019 bisha Luulyo 30